အဓိပ္ပါယ် ဆင့်ပွား ပြောစကား - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on May 6, 2011 at 16:05 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယေဘုယျအားဖြင့် ဗန်းစကားတွေကိုလူအုပ်စုတစ်စုအတွင်းမှာသာ နားလည်တဲ့ ဝေါဟာရတွေနဲ့ တီထွင်ပြောဆိုကြလေ့ ရှိတယ်။ ဗန်းစကားဟာ စံမမှီတဲ့အဆင့်အတန်း သွတ်သွင်းခံရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ချို့ဗန်းစကားတွေဟာ ပြောရဆိုရတာ ထိမိတယ်။ အားရစရာကောင်းတယ်။ ကျစ်လစ်တယ်။ ဒီလိုဂုဏ်ရည်တွေရှိတဲ့အတွက် အများကလိုက်ပြောဆိုရာက မူရင်း အသိုက်အ၀န်း ထက်ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာပြီး စာထဲပေထဲမှာပါ နေရာပေးခံလာရတယ်။ ဒီလိုဗန်း စကားတွေကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရကိုရည်ညွှန်းပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အမေရိကန် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် သင်္ကေတအဖြစ်လည်းသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
1) July 4th is Independence Day in the United States. Happy Birthday, Uncle Sam!
2) No matter how much money I make inayear, Uncle Sam always getsabig chunk of it.
1812 ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နှင့်အင်္ဂလန်တို့ရဲ့ စစ်ပွဲအတွင်း Samuel Wilsom ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်က အမေရိကန်စစ်တပ်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာပစ္စည်းများထောက်ပံ့တင်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ ၀ီလ်ဆင် ကို ဦးလေးဆမ်လို့ခေါ်ကြတယ်။ သူတင်သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ သူ့ရဲ့နာမည်အတိုကောက် US ဆိုတဲ့တံဆိပ်ရိုက်လေ့ရှိတယ်။ US ကိုအရှည်ပြန်လိုက်ရင် Uncle Sam လို့လဲပြောလို့ ရသလို၊ United States လို့လည်းပြန်လို့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး Uncle Sam ဆိုရင် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သင်္ကေတ(အထူးသဖြင့် စစ်ဖြစ်ပွားချိန်မှာ)ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အချိန်ပြည့်၊ အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သော၊ ရပ်နားခြင်းမရှိ စတဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေနဲ့သုံးပါတယ်။
အမေရိကား စတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံကြီးတွေမှာ လိုချင်တာကို လိုချင်တဲ့အချိန်မှာ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်စေရန် စတိုးဆိုင်ကြီးတွေ၊ ကုန်တိုက်ကြီးတွေကို တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်မှာ ခုနှစ်ရက်လုံးလုံး အမြဲမပြတ်ဖွင့်ထားပေးတာက စပြီး သုံးလာလိုက်တာ အခုဆိုရင် အမြဲမပြတ်ရနိုင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုရာမှာ 24/7 လို့သုံးနေကြပါပြီ။ သူနဲ့အဓိပ္ပါယ် တူတဲ့နောက် စကားလုံးကတော့ Around the clock ပါပဲ။
စကားလုံးတွေကြည့်ပြီး အတွေးတစ်မျိုးတော့ပေါက်မသွားပါနဲ့ဦး။ အသက်ကလေးနည်းနည်းရလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘီယာသောက်လို့ဆိုပဲဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးတို့ ခါးတစ်ဝိုက် ထွက်လာတဲ့အဆီပိုလေးတွေကိုပြောတာပါ။
1) I need to exercise more -- my love handles are growing!
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားကိုဖက်တဲ့အခါမှာ ခါးကိုဖက်လေ့ရှိတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီကစတာပေါ့။
Permalink Reply by upokun on February 19, 2012 at 19:20
Permalink Reply by Ratan Biswas on February 19, 2012 at 19:27
Permalink Reply by 0c4eo09wd1rd0 on February 19, 2012 at 20:38
thz for sharing knowledge, bro
Permalink Reply by Diamond on February 20, 2012 at 4:45
Permalink Reply by Hay Mar on February 20, 2012 at 12:10
Permalink Reply by phupi on February 22, 2012 at 6:18
Permalink Reply by tayzartun91 on February 23, 2012 at 10:24
Permalink Reply by Nilar Win on February 23, 2012 at 18:50
Can send later.
Permalink Reply by Thandar ko on November 10, 2012 at 20:27
Permalink Reply by Thike Htun on November 10, 2012 at 21:41
Permalink Reply by AUNG KYAW ZAW on November 11, 2012 at 9:02
Permalink Reply by SAKO on November 11, 2012 at 22:35